We Fight We Win. -- " More than Media ": 'မိတ္ထီလာတွင် ရဲများအနီးအနားရှိနေလျက် အကြမ်းဖက်ခံရကြောင်း ကင်တားနား ငိုယို၍ပြောသွားခဲ့
'မိတ္ထီလာတွင် ရဲများအနီးအနားရှိနေလျက် အကြမ်းဖက်ခံရကြောင်း ကင်တားနား ငိုယို၍ပြောသွားခဲ့
မိတ္ထီလာမြို့အဝင်မှာ ၂ဝဝကျော်လောက်ရှိတဲ့ လူအုပ်ကြီးက သူ့ရဲ့ကားမှန်တွေကို ထုရိုက်ပြီး အော်ဟစ် အကြမ်းဖက်နေချိန်မှာ လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ လက်ပိုက်ကြည့်နေတာဟာ အစိုးရရဲ့ အဓိကပျက်ကွက်မှုကြီးလို့ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် ကင်တားနားက ရန်ကုန်မြို့မှာ ကြေညာချက်ထုတ် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ခုလို အစော်ကားခံရတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲမိပါကြောင်း ငိုယို၍ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
it's very very very shame on you!!!!! you!!!!!myanmar government 2shame on you !!!myanmar government 2shame on you!!!!myanmar government
Its beginning of misfortune to Mr President U Thein Sein?
This is lesson for you Quintana, next time don't come, you really don't know what is happening in ground level, when you ever thinking for those Kalar, next time you are in very dangerous !!